အရေးကြီးပါသည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အရေးကြီးပါသည်။
Posted by ရွှေတိုက်စိုး on Feb 23, 2011 in Myanma News | 11 comments
Myanma News News
အရေးကြီးပါသည်ဆက်လက်ဖြန့်ဝေပေးကြပါရန်။ သူငယ်ချင်းတို့အကောင့်ကိုheat.cheehtoke@gmail.comဆိုသောအကောင့်လာအပ်ခဲ့မည်ဆိုပါကလုံးဝလက်ခံခြင်းမပြုကြပါနှင့်..ထိုအကောင့်မှာ မြန်မာနိင်ငံ ရှိသမီးပျိုလေးများကို မှောင်ခိုတင်သွင်းနေသော အဖွဲ့တစ်ခုမှအကာင့်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း..သိရှိထားပါသည်..ကျေးဇူးပြုပြီး ယခုမေးလ်(Mail)လေးကိုဆက်လကိဖြန့်ဝေပေးစေ ချင်ပါသည်
ဟုတ်ကဲ့ ဆက်လက်ဖြန့်ဝေထားပါတယ် ကျေးဇူး
ဘယ်လိုကြောင့် လူမှောင်ခိုအဖွဲ့ ရဲ့.. အီးမေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကို.. အချက်အလက်လေးနဲ့ သေသေချာချာပြောပြသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ..
သူများက လူမှောင်ခိုဆိုတာနဲ့.. အကုန်လုံးက လိုက်မှောင်ခို ဖြစ်နေကြတာ ထင်ပါတယ်.. အချက်အလက် ဒီထက် တိကျရင်.. အများကြီး အကူအညီပေးနိုင်မှာပါ.. ကိုရွှေတိုက်စိုးလဲ သူများဆီက ရတာလို့ ထင်ပါတယ်.. ရတဲ့လူကို ဆက်မေးကြည့်ရင်လဲ သူများပြောပြတာလို့ ထပ်ပြောမှာပါ.. အဲ့ဒီလိုနဲ့ အစရှာမရပဲ.. ဖြစ်နေတဲ့ ဂျီမေးလ်နဲ့ ဂျီတော့က မက်ဆေ့ခ်ျတွေ တပုံကြီးပါ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ဒီလိပ်စာ ဒီလောက် အော်နေမှတော့ သူလည်း လိပ်စာ ပြောင်းရောပေါ့။
လိပ်စာ ဆိုတာ လုပ်ရခက်တဲ့ အရာမှ မဟုတ်တာ။
နေပါဦး။ ဒီ အကောင့်ကို လက်ခံတာနဲ့ ပဲ မိန်းကလေးတွေကို ရောင်းစားလို့ ရရောလား ???? သိပ်တော့ အခြေအမြစ် မရှိဘူးနော်.။ အကောင့် တခုက လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုမှ မပေးနိုင်ဘူး။ ကျုပ် အသိ တယောက်ကလဲ ဒီလို အကြောင်း အရာမျိူးနဲ့တခြား အကောင့် တခုကို လက်မခံဖို့အကြောင်းကြားတယ်။
လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်က အတွေးအခေါ်မျိုးနဲ့ တော့ မီးဗျို့ ..မီး ဆိုတိုင်း ခြေညောင်းခံပြီး မပြေးချင်ဘူးဗျာ။
ဟုတ်မှလဲ လုပ်ဦး။ ဖွတဲ့ သူက သူနဲ့မကြည်တဲ့ အကောင့် ကို Black List ဖြစ်အောင် ခွေးဥာဏ်နဲ့ဖွတာ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒီ အကောင့်ပိုင်ရှင်ဟာ လူမှောင်ခို ဂိုဏ်းက အကောင့်မှန်း သိနေမှဖြင့် လူကို မသိပဲနေမလား။
ဒီ ခေတ်ကြီးမှာ အပေါက်တွေ ပြောနေတယ်။
သေချာအောင်သာ စုံစမ်းပါဗျာ… သေချာရင် အစရှာပြီး စုံစမ်းခိုင်းလိုက်မယ်… ကိုယ့်ဘက်က သေချာဖို့ပဲ လိုတယ်…
တောင်ပုလုဆရာတော် အိပ်မက်နဲ့ မွှားတွားလို့ 
မြေမျိုနေဒုန်း ခေါင်းကို ဥက္ကာပျံကြီးတည့်တည့်ကျလာလိမ့်မယ်
သမီးပျိုလေး တွေပဲ လုပ်တယ်ကြည့် (လူဆိုး) သားပျိုလေတွေကျတော့မပါဘူး တင်သွားပြီ သူလာအပ်တာကိုတော့ မစောင့်ဘူး ကိုယ်ကအရင် အပ်ပလိုက်ပြီ(နောက်တာ)
အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။ အားပေးတဲသူရော ရှုပ်ချတဲ့သူရော အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်တစ်ခုတော့ပြောချင်တယ်။ ကျွန်တော် က ဒီသတင်းကိုကြားကြားချင်း နှမသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်နဲ. တင်လိုက်မိတာပါ။ လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ရွှေဖြစ်ပေမယ့် မလိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက် မစင်ပုံဖြစ် နေရင်တော့ အမြင်နဲ.အတွေးအခေါ်ပိုင်း ကွာဟမှုလို.ထင်ပါတယ်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ရှုံ့ ချတာက ခင်ဗျားကို မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါမျိုး ကောလဟာလတွေက အများကြီးဗျ။